फेसबुकबाट ठगीका अनेक रुप...! - Naya Patrika
फेसबुकबाट ठगीका अनेक रुप…!
टेकराज थामी काठमाडाैं | पुष २४, २०७४
प्युूठान राम्दी–४ की रिता खड्का फेसबुकमा रमाइरहेकी थिइन् । यही क्रममा डेनियल हेन्ज वलग्याङ्ग नामबाट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो । फ्रोफाइन हेरिन् । उनी अस्ट्रेलियन नागरिक रहेको देखियो । फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एसेप्ट गरिन् । डेनियलले तुरुन्त थ्यांक्स भन्दै म्यासेज गरे । उनले पनि वेलकम भन्दै उत्तर फर्काइन् । यसरी सुरु भएको संवाद केही महिनापछि दोस्तीमा बदलियो । दुवैबीच घन्टौँ गफ चल्न थाल्यो ।
रिता बिरामी थिइन् । फेसबुकमा डेनियल गफिइरहेका थिए । उनले डनियलसँग सेयर गरिन् । डेनियनले ‘गेट वेल सुन’ भने र पार्सलमार्फत सुन र डलर गिफ्ट पठाइदिएको म्यासेज पठाए । रिता खुसी भइन् । रिप्लाईमा थ्यांक्स भनिन् । प्रतिउत्तरमा डेनियलले गिफ्ट दिन तिमीलाई इन्डियाबाट फोन आउँछ भने । त्यसपछि रिता भारतबाट आउने फोनको प्रतीक्षामा रहिन् ।
जब भारतबाट फोन आयो
नभन्दै दुई दिनपछि भारतबाट फोन आयो । फोनमा अंग्रेजी र हिन्दी भाषा मिसाएर केटी बोलिन् । उनले भनिन्, ‘तिम्रो नामको पार्सल आएको छ । भन्सार तिर्नुप¥यो । तिमीले मलाई ६ लाख २० हजार रुपैयाँ पठाइदिनुप¥यो । पार्सलमार्फत पठाएको सुन र डलर पाउने लोभमा रिता पैसा पठाउन तयार भइन् । तर, रकम कसरी पठाउने ? पार्सल आएको बताउने भारतीय केटीले उनलाई उपाय बताइन्, ‘तिमीले उक्त रकम नेपालमा रहेका कृष्टिना गुरुङको खातामा पठाइदिनु ।’
रिता बिरामी थिइन् । फेसबुकमा डेनियल गफिइरहेका थिए । उनले डनियलसँग सेयर गरिन् । डेनियनले ‘गेट वेल सुन’ भने र पार्सलमार्फत सुन र डलर गिफ्ट पठाइदिएको म्यासेज पठाए । रिता खुसी भइन् ।
भारतीय युवतीले पार्सलको फोटोसमेत खिचेर पठाएकी थिइन् । त्यसैले उनी पार्सल पाउनेमा ढुक्क थिइन् । भारतबाट युवतीको फेरि फोन आयो । भनिन्, ‘रकम पुगेन । भन्सार क्लियरेन्स गर्न अझै रकम पठाइदिनु ।’ दोस्रो पटक रितासँग ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ मागियो । त्यसअघि पनि उनले रिता उप्रेती, अनुता घले र सपना ढुंगानाको बैंक खातामा रकम पठाइसकेकी थिइन् ।
रकम पठाएपछि पनि सामान आएन । त्यसपछि भने रितालाई शंका लाग्न थाल्यो । उनी उजुरी दिन महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धानको कार्यालयमा पुगिन् । उले अनुता र सपनाविरुद्ध उजुरी दिइन् । प्रहरीले उजुरीमाथि तत्काल कारबाही अघि बढायो । अन्ततः घटनामा संलग्न प्रेमबहादुर कटुवाल, कृष्टिना गुरुङ, रूपा न्यौपाने, देवकी रोइला र सपना ढुंगाना पक्राउ परे ।
घटनाको योजनाकार प्रेम कटुवाल
महाशाखाका अनुसार अस्ट्रेलियाबाट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउने अभियुक्त पत्ता नलागे पनि फेसबुकमार्फत पठाएको रकम प्राप्त गर्ने अभियुक्त भने पक्राउ परिसकेका छन् । यसक्रममा रिताबाट मात्रै प्रेमले पार्सलको प्रलोभन देखाई ४१ लाख ७० हजार ९ सय रुपैयाँ लिएको खुलेको छ । त्यसो हुँदा घटनाका मुख्य योजनाकार प्रेम नै रहेको प्रहरीको भनाइ छ । उनी महाराजगन्जस्थित ब्यु स्काई मेनपावर कम्पनीका सञ्चालक हुन् ।
महाशाखाका अनुसार प्र्रेमले रिताको रकम सपना ढुंगानाको बैंक खतामा जम्मा गर्न लगाए । उक्त रकममध्ये ३६ लाख २० हजार नौ सय रुपैयाँ आफ्ना मेनपावर लेखापाल श्यामनारायण मानन्धरको खातमा पठाउन लगाए । बाँकी ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भने मेनपावरकै कर्मचारी मोतीराम भट्टराईको खातामा पठाउन लगाई लिएको खुलेको छ ।
महाशाखाका डिएसपी रविन कार्की फेसबुक ठगी अभियोगमा अस्टे«लियन नागरिक पक्राउ नपर्नुले यस्ता गतिविधिमा नेपाली नै संलग्न रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘फेसबुक प्रयोग गरेर ठगिने थु्रपै छन् । प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छ । तर, अस्ट्रेलिन नागरिक पक्राउ परेको मेरो जानकारीमा छैन । यस्ता घटनामा नेपाली नै धेरै संलग्न रहेको खुलेको छ । प्रहरीले अप्रेसन गरेको छ । तर, घटना रोकिएका छैनन् ।’
श्रीमती बनाई ठगी
सिन्धुपाल्चोक माङ्खा–७ का ३३ वर्षीय तुलबहादुर तामाङले संखुवासभा माकल–५ की मनकला गुरुङलाई फेसबुक रिक्वेस्ट पठाए । मनकलाले रिक्वेस्ट एसेप्ट गरिन् । दुईबीच म्यासेज आदानप्रदान चल्यो । घनिष्टता बढ्दै गएपछि तुलबहादुरले मनकलालाई प्रेम प्रस्ताव गरे । मनकलाले त्यो पनि स्वीकार गरिन् । अन्ततः दुईबीच विवाह भयो ।
तुलबहादुर मनकलाका आफन्तसँग घुलमिल हुन थाले । यही क्रममा मनकलाका नातेदार राजेश गुरुङ र कैलाश गुरुङसँग फेसबुकमार्फत सम्बन्ध बढाए । राजेश र कैलाश विदेशमै थिए । उनीहरू सकेसम्म राम्रो मुलुक जाने मनस्थितिमा थिए । यो कुरा उनीहरूले तुलबहादुरसँग भने । तुलबहादुरले तुरुन्तै अमेरिकन आर्मीमा जागिर मिलाइदिने आश्वासन दिए ।
‘उनले कसैलाई अमेरिका त कसैलाई क्यानडा पठाइदिने प्रलोभनमा ठगी गरेको खुलेको छ । सबै ठगीमा फेसबुक प्रयोग भएको छ ।’
प्रलोभनबाट राजेश र कैलाश प्रभावित बने । उनीहरूले हुन्छ भने । तुलबहादुरले भिसा प्रोसेस गर्न २१ लाख रुपैयाँ मागे । उनीहरूले विनाहिच्किचाहट मागेबमोजिमको रकम दिए । भिसा प्रोसेसका लागि थप काम गर्नुपर्ने भन्दै दुवैलाई काठमाडौं बोलाए । उनीहरू काठमाडौं आए । त्यसपछि तुलबहादुर एकाएक बेपत्ता भए । अनि पो उनीहरूले आफू ठगिएको महसुस गरे ।
ज्वाइँबाट एकाएक ठगिएर रन्थनिएका उनीहरू महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा पुगे । प्रहरीले उनकी श्रीमती मनकलालाई पनि झिकायो । तुलबहादुर राजेश र कैलाशसँग २१ लाख रुपैयाँ लिएपछि बेपत्ता भएछन् । प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो । खोज्दै जाँदा त्यसरी ठगिनेमा राजेश र कैलाश मात्रै होइन, अन्य पनि रहेको खुल्यो ।
विदेश पठाइदिने भन्दै ठग्दै
प्रहरीका अनुसार तुलबहादुरले यसअघि पनि थुप्रैसँग फेसबुक प्रयोग गरी ठगी गर्दै आएका थिए । त्यसमध्ये एउटा मुद्दामा सजायसमेत भोगिसकेका थिए । प्रहरीका अनुसार उनले सिन्धुपाल्चोककी सिर्जना दोङ र उनका आफन्तको २२ लाख रुपैयाँ ठगेका थिए । उनले सिर्जनालाई डिपेन्डेन्ट भिसामा अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा ९ लाख रुपैयाँ ठगेका थिए । उनका आफन्त सञ्जय दोङ र भीम लामालाई क्यानडा लैजाने भन्दै १३ लाख रुपैयाँ ठगेका थिए ।
प्रहरीका अनुसार रोजगारीका क्रममा लेबनान पुगेकी दोङसँग उनको भेट फेसबुकमार्फत भएको थियो । जेभी नामबाट खोलिएको फेसबुक अकाउन्टबाट उनले दोङसँग सम्बन्ध बढाएका थिए । पछि दोङका आफन्त सञ्जय र भीमसँग सम्बन्ध बढाएका थिए । उनले सबैलाई नेपाल बोलाएर रकम फुत्काए ।
प्रहरीका अनुसार तुलबहादुरले यसअघि फेसबुकमार्फत रोजगारीका लागि साइप्रस पुगेकी कुसुम लामासँग पनि ९ लाख रुपैयाँ ठगेका थिए । उनले कुसुमलाई पनि क्यानडा लैजाने प्रलोभन देखाई ठगी गरेका थिए । उनी सोही मुद्दामा डेढ वर्षअघि नै फक्राउ परेका थिए । पछि धरौटी तिरेर छुटेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
त्यसलगत्तै उनी फेरि ठगी धन्दामा सक्रिय हुन थाले । महाशाखाका डिएसपी प्रजित केसीले भने, ‘उनले कसैलाई अमेरिका त कसैलाई क्यानडा पठाइदिने प्रलोभनमा ठगी गरेको खुलेको छ । सबै ठगीमा फेसबुक प्रयोग भएको छ ।’ उनले फेसबुकमा युवतीलाई रिक्वेस्ट पठाउँथे । रिक्वेस्ट एसेप्ट भएपछि प्रलोभन दिँदै सम्बन्ध बढाउँथे । यसरी उनले विभिन्न व्यक्तिलाई ठगी गरेको खुलेको छ ।
सेनाका जवान नै ठगिए
संखुवासभा स्थापुन–९ का २४ वर्षीय अमृत दाहाल नेपाली सेनाका जवान हुन् । उनलाई फेसबुकमार्फत मिराबेल विलसन नामबाट रिक्वेस्ट आयो । रिक्वेस्ट एसेप्ट गरे । विलसन र उनीबीच कुराकानी हुन थाल्यो । विलसनले आफू अमेरिकन भएको र अमेरिकी सेनाअन्तर्गत आफगानिस्तानमा कार्यरत रहेको बताए । अमृत उनीसँग अझ नजिकए ।
वर्ष दिनसम्म उनीहरूबीच कुराकानी चल्यो । यही क्रममा विलसनले उनलाई युएस डिपार्टमेन्टमा होमल्यान्ड सेक्युरिटीको जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिए । अमृत प्रलोभनमा फसे । त्यसका लागि गर्नुपर्ने प्रोसेसबारे उनले विलसनसँग सोधे । विलसनले तुरुन्तै स्नेहा श्रेष्ठको नाममा ९२ हजार चार सय रुपैयाँ हालिदिन भने । उनले त्यसै गरे ।
रकम अपुग भएको भन्दै पछि फेरि ३ लाख ८९ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ पठाउन भने । उनले त्यो पनि पठाए । त्यसपछि विलसन एकाएक सम्पर्कविहीन बने । बल्ल पो उनलाई आफू ठगिएको महसुस हुन थाल्यो । उनी महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा कार्यालयमा पुगे । उजुरी दिए । प्रहरीले अनुसन्धान ग¥यो । फेसबुकमार्फत अमेरिकी आर्मी बताउने दुई अभियुक्त काठमाडौंबाट पक्राउ परेपछि थाहा भयो, विलसन त नाइजेरियन पो रहेछन् ।